DEG DEG: Alshabaab oo la wareegay Balcad iyo Ciidamada Amisom oo Gaadiid Badan laga gubay – Kismaayo24 News Agency
DEG DEG: Alshabaab oo la wareegay Balcad iyo Ciidamada Amisom oo Gaadiid Badan laga gubay
by admin 2nd March 2018 040
Dagaallamayaal hubeysan oo alshabaab ka tirsan ayaa inta badan la wareegay dagmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe.
Ka hor inta aysan alshabaab gudaha usoo galin dagmada balcad waxa ay weerar dhabo gal ah ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada Amisom oo maraayay duleedka balcdad waxaana wararku sheegayan in dagaalka lagu gubay qaar ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada AMISOM halka sidoo kale shabaabka gacanta ku dhigeen mid kamid ah baabuurta xamuulka ciidamada Amisom.
Intaas kadib dagaallamayaal badan oo aad u hubeysan ayaa gudaha usoo galay dagmada balcad waxaana ay la wareegeen xaruntii maamulka dagmada balcad oo agabkii yiilay waa ay qaateen sidoo kale shabaabku waxa ay xabsiga kasii daayeen maxaabiis badan oo xabsiga ku xirnaa iyadoo sidoo kale ay gubeen idaacaddii radio balcad oo aheyd idaacad maxali ah oo magaalada ku taala .
Dhaawacyada ciidamada Amisom ayaa la geeyay deegaanka qalimow waxaana hadda go’an wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye iyadoo gaadiid rakaab oo ka tagay muqdisho ay ku xanibanyihiin duleedka dagmada balcad sidoo kale gaadiidkii ka imaan jiray jowhar ayaa isna ku xaniban duleedka magaalada.
AKHRISO: Dowladda Soomalia oo waxba kama jiraan ku tilmaamtay heshiiska DP world ee Dekedda Berbera
Weerar Ismiidaamin ah oo lagu qaaday Xarun Ciidamada Imaraadka uu tababaray ay ku leeyihiin Afgooye
SAWIRRO:-Guddiga Dastuurka Labada Aqal ee DFS Oo La Kulmay Wakiilo Ka Socday Qaramada Midoobey
Ahmed sudani 20th March 2018
Qarax Qasaaro geystay oo ka dhacay duleedka Magaalada..
Maqaal: Iga dhaqaaqdaye ila dhadhami xildhibaan!! Qorey Cabaas Cabdullahi.